मात्तिने रातमा तन्नेरीहरुले लेखाए यस्तो हर्कत ! | suryakhabar.com
Home विचित्र संसार मात्तिने रातमा तन्नेरीहरुले लेखाए यस्तो हर्कत !
एजेन्सी । कहिले कहिं मस्त मात्तिन मन लाग्छ । उन्मुक्त रमाउन मन लाग्छ । वेपर्वाह बहुलाउन मन लाग्छ । सायद यहि मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न होला, वेलायतमा चाहि एक रात मस्त मात्तिने गरिन्छ । बर्षमा एक दिन । त्यो पनि क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा ।
नामै पागल शुक्रबार, संयमित हुने कुरै भएन । यहाँ तरुनी–तन्नेरीहरुले अनेक हर्कत देखाउँछन् । हेर्नै नसकिने तमासा पनि देखाउँछन् । कामुक पहिरनमा भेला भएका तन्नेरीहरु जब मात्तिन्छन्, सम्हालिने कुरा पनि त भएन ।
Tags: मात्तिने रातमा तन्नेरीहरुले लेखाए यस्तो हर्कत !
१५ पुष २०७४, शनिबार ११:५०